नेप्सेमा २ कम्पनीकाे सेयरमूल्य समायोजन, कुनकाे कतिमा खुल्छ काराेबार ? - Arthasansar
नेप्सेमा २ कम्पनीकाे सेयरमूल्य समायोजन, कुनकाे कतिमा खुल्छ काराेबार ?
सोमबार, ०८ कार्तिक २०७८, ०६ : १५ मा प्रकाशित
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कुमारी बैंक लिमिटेड र गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकाे सेयरमूल्य समायोजन भएको छ ।
कुमारी बैंककाे ६ प्रतिशत बोनस सेयर पछि नेप्सेले प्रतिकित्ता २ सय ६४ रूपैयाँ १५ पैसा कायम हुने गरी सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले आइतबारकाे अन्तिम कारोबार मूल्य २ सय ८० रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो ।
बैंककाे २१औँ वार्षिक साधारण सभा कार्तिक १६ गते मंगलबार, कुमारी बैंक लिमिटेड, नक्साल, काठमाडाैँमा बिहान ११:३० बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ ।
त्यसैगरी, गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकाे १६.९०६४ प्रतिशत बोनस सेयर पछि नेप्सेले प्रतिकित्ता एक हजार ३ सय ४८ रूपैयाँ ०९ पैसा कायम हुने गरी सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले आइतबारकाे अन्तिम कारोबार मूल्य एक हजार ५ सय ७६ रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो ।
संस्थाकाे छैठाैँ वार्षिक साधारण सभा कार्तिक २२ गते, साेमबार न्यू अञ्जुली हाेटल, धनकुटामा बिहान ११ बजेबाट सुरू हुनेछ । सभामा संस्थाकाे असाेज १० गते बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले गरेकाे निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयाेजनका लागि ०.८८९८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।